မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဝန်ဆောင်မှု နယ်ပယ်၌ စင်ကာပူလုပ်ငန်းရှင်များမှ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် | Commerce Journal
Home » -ပြည်ပရှိမြန်မာသံရုံးများမှပေးပို့သောသတင်းများ » မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဝန်ဆောင်မှု နယ်ပယ်၌ စင်ကာပူလုပ်ငန်းရှင်များမှ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် » အထွေထွေ
Tue, 03/31/2015 - 21:32 -- journal_editor
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ စင်ကာပူ ကုမ္ပဏီများမှ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတည်ထောင်၍ စတင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် လျက်ရှိကြောင်း စင်ကာပူနိုင်ငံထုတ် နေ့စဉ်သတင်းစာများက ဖော်ပြခဲ့ကြ ပါသည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ဌာနချုပ်ရုံးဖွင့် လှစ်ထားရှိသည့် Modern Montessori International လီမိတက် (MMI) သည်မြန်မာနိုင်ငံ၌ စင်ကာပူ ပညာရေးလေ့ကျင့်မှုအကယ်ဒမီ(Singapore Education Training Academy Co., Ltd.) အမည်ဖြင့် ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းလျက် ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၌ မူလတန်းကြိုကျောင်း တစ်ခုကို မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါ သည်။ အဆိုပါ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းကို စင်ကာပူဘက်မှ လုပ်ငန်းရှင် မြ.ုေူငာက-အ့ကဏသညညကျောပ နှင့် မြန်မာဘက်မှ ဦးစိုးမြင့် (ခ) မြ.ှငညါမေသသ တို့၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် အစုအစပ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းစီထည့်ဝင်လျက် ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သိန်းဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ MMIမှပြောဆိုချက်အရလာမည့်ဧပြီလ မှစတင်၍ ဤမူလတန်းကြိုကျောင်း၌ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပထမသုတ်အနေဖြင့် ကျောင်းသား ဦးရေ ၁၀၀ ကိုလက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စတင်လုပ်ကိုင်သည့် ပထမနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဝင်ငွေအမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ သိန်းကျော်ရရှိမည်ဟု ခန့် မှန်းထားရှိပြီး ဒုတိယနှစ်တွင် ဝင်ငွေလည်ပတ်မှုမှာ နှစ်ဆတိုးလာဖွယ်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
စင်ကာပူရှိ MMI လီမိတက်၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်Dr. T. Chandroo ကပြောကြားရာတွင် ၎င်းင်းတို့အနေဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း အာရှဒေသရှိဖြစ် ထွန်းစဈေးကွက်များ၌ မူကြိုနှင့်ဆရာအတတ်သင်ကျောင်းပေါင်း ၂၀အထိ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ရန် လုပ်ငန်းလျာထားလျက်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကို လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ကျော်ကာလက ပင် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းစတင် မှုပြုနိုင်ရန် စီမံချက်ချ ဆွေးနွေးပြင်ဆင် မှုများကို အချိန်တစ်နှစ်ခွဲခန့် ရယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်း၊ ယခုသင်တန်း ကျောင်းမှာ ၎င်းင်းတို့ကုမ္ပဏီ၏ ၂၅ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်ကာလနှင့် တိုက်ဆိုင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ လာမည့် ငါးနှစ် တာကာလအတွင်း ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေး မြို့များ၌ သင်တန်းကျောင်း နှစ်ခုစီကို တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ရည်မှန်းထား ကြောင်းပြောဆိုပါသည်။ စင်ကာပူ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာ ရောက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုမီ မိမိတို့ ရည်မှန်းထားသည့် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ် သက်၍ သုတေသနပြုလေ့လာမှုနှင့် သင့်လျော်သည့် ဒေသခံစီးပွားဖက်
လုပ်ငန်းရှင်များရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းတို့ ကို လုံလောက်စွာလုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ် ကြောင်းဖြင့်လည်းDr. Chandroo က အကြုံပြုပြောဆိုပါသည်။
MMI လီမိတက်သည် အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းဆရာအတတ် သင်ကျောင်းနှင့် မူလတန်းကြိုကျောင်းများအား ဖရန်ချိုက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခွင့်လိုင်စင်များပေးအပ်၍ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ စင်ကာပူ နိုင်ငံအတွင်း မူကြိုကျောင်း ၃၂ ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းင်းတို့ အနက် ဖရန်ချိုက်လိုင်စင်ပေးအပ်ထားသည့် မူကြိုကျောင်းမှာ ၈ ခုရှိပြီး ကျန်မူကြို ကျောင်းများမှာ ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲ မှုဖြင့် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
The Straits Times သတင်း ဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရMMI နှင့် စင်ကာပူ ပညာရေးလေ့ကျင့်မှု အကယ်ဒမီတို့သည် CSRျ ခေါ် ကုမ္ပဏီ များ၏ လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် တာဝန်ယူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကျေးလက် ဒေသများ၌ စာတတ်မြောက်မှုမြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ ပညာ သင်ဆုများ ပေးအပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါ သည်။
နေအေးလွင်၊ စီးပွားရေးသံမှူး၊ မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့